Raiisul wasaare Farmaajo "Ilaa ay dhamaato halka Sano Kursiga waan ku fadhinayaa" – SBC
Raiisul wasaare Farmaajo "Ilaa ay dhamaato halka Sano Kursiga waan ku fadhinayaa"
Muqdisho- Raiisul wasaaraha DKMG ah ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in xilka raiisul wasaare nimada uu u hayo dalka uusan wareejin doonin tan iyo inta uu ka dhameystirayo nidaamka uu dalku lahaa .
Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in raiisul wasaare yaashii dalka soomaray ee ka horeeyay ay meel banana la wareegi jireen isagana uu meel banana la wareegay balse uu doonayo in cida bedeleysa uu ku wareejiyo meel uu ka jiro nidaam iyo kala dambeyn.
Waxa uu sidoo kale intaasi raaciyay hadalkiisa Raiisul wasaaraha in mudo kordhinta ay go’aan sadeen golaha wasiirada ee ah halka sano ay tahay in la dhameystiro.
Waxaanu raiisul wasaaraha ku adkeystay in halka sano ee lagu daray xukuumada ay tahay lama taabtaan, islamarkaana uusan ka degi doonin kursiga ilaa uu dhameysto halka sano.
Sidoo kale Raiisul wasaare Farmaajo waxa uu carabka ku dhuftay in dowladiisu ay maalmaha soosocda diyaarineyso in ay cagta mariso xarakada Alshabaab, isagoo tusaale u soo qaatay dagaalada ka jira gobolada dalka sida, Gedo Hiiraan Jubada hoose, Baay iyo Bakool, waxaanu sheegay in ciidamada gobolada ka dagaalamaya iyo kuwa caasimada ay halmeel isugu imandoonaan .
Hadalka Raiisul wasaare Farmaajo ayaa ku soo aadaya xili gelinkii dambe ee shalay uu kulan dheer oo qaatay saacado uu la qaatay Odayaasha waxgaradka iyo Duqooytida beelaha kala duwan ee ku sugan caasimada dalka, isagoona ku tartansiiyay in ay odayaashu ka qeyb qaataan nabada iyo dib u heshiisiinta
Waxa uu raiisul wasaaruhu sidoo kale u sheegay odayaasha in hadii kaalintooda la gabo uu dalku galayo Foodo iyo kala dambeyn la’aan, isagoona soo qaatay meelaha odayaasha laga tixgeliyo ay nabad iyo xasilooni ka jirto, meelaha aan laga tixgelininna ay ka jirto fowdo iyo kala dambeyn la’aan.
Sikastaba ha ahaatee hadalka Raiisul wasaaraha dowlada KMG ah ayaa waxa uu qeyb ka noqon karaa dooda weyn ee ka dhexjirta labada gole ee DKMG ah taas oo ku aadan mudo kordhinta golaha wasiirada .